WestJet Inotsigira Inotarisirwa Yekudzivirira Yevashandi veAirline
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » WestJet Inotsigira Inotarisirwa Yekudzivirira Yevashandi veAirline
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Health News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Ndege inoshanda kushandira inodiwa nehurumende yekudzivirira nhomba kune vanogadzwa nemutemo vashandi vendege pakupera kwaGumiguru.
WestJet parizvino ine vanoshanda vanoshanda vangangoita zviuru zvitanhatu zveWestJetters, nepo 6,000 ichiramba isingashande kana kuita furloughed.
Swoop parizvino ine vanoshanda vanoshanda vevane mazana matatu nemakumi matatu nevashandirwi, nepo vanopfuura zana nemakumi masere vachiramba vasingashande kana kushushikana.
IWestJet Group inotevedzera izvo zvinodiwa kuti vafambi vekumba vanyatso-vachengetwa kana kuyedzwa vasati vaenda.
IWestJet Group nhasi yatambira chiziviso cheGurukota rezvekutakurwa, Omar Alghabra maererano nezvekudzivirira majekiseni evashandi venhandare.
Gurukota rezvekutakurwa Omar Alghabra
"Tiri kuramba tiri mudyandigere mukubaya majekiseni ekudzivirira nhomba kuCanada uye tiri kushanda nesimba kushandira mutemo wehurumende wezvekudzivirira majekiseni evashandi vendege," akadaro Mark Porter, WestJet Executive Mutevedzeri weMutungamiri, Vanhu uye Tsika. "Kubaya majekiseni ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekuchengetedza vatenzi vedu nevashandi, tichidzivirira kupararira kwe COVID-19."
"Tinonzwisisa vanhu vedu vachange vaine mibvunzo uye vachange vachikurukura nevashandi vedu nemapoka evashandi munguva chaiyo," akaenderera mberi VaPorter. "Tiri kutsvaga mamwe mashoko kubva kuhurumende yemubatanidzwa pane zvinodiwa uye takazvipira kushanda pamwechete kuti tione kubudirira kwebumbiro iri mukupera kwaGumiguru."
WestJet parizvino ine anoshanda anoshanda angangoita 6,000 WestJetters, nepo 4000 ichiramba isinga shande kana furloughed. Swoop parizvino ine vashandi vanoshanda vevane mazana matatu nemakumi mana evashandi, nepo vanopfuura zana nemakumi masere vachiramba vasingashande kana kufuriza.
The WestJet Boka inoenderana nezvinodiwa kuti vafambi vekumba vanyatsobaiwa jekiseni kana kuyedzwa vasati vaenda. Boka renhandare yendege iri kukurudzira kuti kukurumidza-antigen kuyedza inzira inogamuchirwa, inowanika uye inodhura kune vafambi vasina kubayiwa.